Ekwentị: + 86-15066360289
Mmadụ Bịa na ị na anyị ụlọ ahịa!
nchekwa akpụkpọ ụkwụ
goodyear Welt ewu nchekwa akpụkpọ ụkwụ
Ịkwanyere mmiri ozuzo akpụkpọ ụkwụ
Gịnị bụ ọrụ nke abụọ ọbụ ọrụ akpụkpọ ụkwụ?
Na Nchikota nke ugbu a akpụkpọ ụkwụ naanị ihe onwunwe, na abụọ naanị aghọwo ndị kasị adaba na ngwọta kasị mma. Nchedo nke naanị na-enweta site na-eyi ndị na-eguzogide na mgbochi ileghara arụmọrụ nke outsole, nke na-ghọtara site ìhè na juu ji mara midsole. Nkasi Obi mgbe na-eje ije.
Site na nke a echiche, na nke ugbu a kasị mma Nchikota bụ RU / Pu, iji roba (RU) ime ka outsole, polyurethane (Pu) dị ka midsole, wee site na nyagide ma ọ bụ chemical bonding ọrụ na bonding ọrụ nke Pu onwe ya agbụ na outsole na midsole. N'ezie, ná mpụta ọbụ nke akpụkpọ ụkwụ nwekwara ike na-egbu maramara, burnished, na pịrị.
E nwekwara a Nchikota naanị ihe onwunwe, ya bụ Pu / TPU (polyurethane / thermoplastic polyurethane). Ọ bụ ala na-eyi. Ọzọkwa, na ojiji nke thermoplastic polyurethane ime ka outsole osobo mkpa nke dịkọrọ ndụ na-emepụta, n'ihi na ọbụ mere nke TPU nwere ike na-emepụta a yi naanị, na n'ilu ọlu usoro na ọbụ nwekwara ike ga-iche.
Ọzọ abụọ-oyi akwa naanị mere nke Pu / Pu (polyurethane / polyurethane) ihe onwunwe Nchikota, na outsole na midsole na-mere nke polyurethane. Maka outsole, a karịsịa na ok polyurethane ihe onwunwe ga-eji nọgide na-enwe wear eguzogide ji mara outsole. Maka midsole, foamed polyurethane ga-ahọrọ maka nkasi obi.
Post oge: Dec-24-2018
NO.7555 nke Xingyuan n'okporo ámá, Zhanglu, Gaomi obodo,
Weifang obodo, Shandong n'ógbè, China